WICShopper उपकरणहरू प्रदान गर्दछ जुन WIC तपाईंलाई प्रयोगको लागि सजिलो बनाउँदछ। सबै एजेन्सीहरू समर्थित छैनन् र यस्तै क्षमताहरू छन् अनुप्रयोग स्टोरमा विवरण पढ्न निश्चित हुनुहोस्!
कृपया! अनुप्रयोग एन्स्टल गर्नु अघि तपाईंको एजेन्सी समर्थित छ भनेर निश्चित गर्न एप स्टोरमा वर्णन पढ्नुहोस्। यदि यो छैन भने, तपाईं हामीलाई ईमेल गर्न सक्नुहुनेछ [ईमेल सुरक्षित] पत्ता लगाउन यदि र तपाईंको एजेन्सी समर्थित हुनेछ जब।
WICShopper ले निम्न राज्यहरूमा WIC कार्यक्रमहरू समर्थन गर्दछ: म्यासाचुसेट्स, फ्लोरिडा, आयोवा, केन्टकी, W. भर्जिनिया, टेक्सास, न्यू मेक्सिको र Wyoming
तपाईंको WIC EBT कार्डको अगाडि १ digit अंकको नम्बर प्रयोग गरेर रेजिष्टर गर्नुहोस्। TX, NM, WY वा OH मा दर्ता सम्भव छैन।
एकपटक तपाईंले आफ्नो कार्ड दर्ता गरेपछि, तपाइँको वर्तमान बेनिफिटहरू स्वत: अनुप्रयोगमा डाउनलोड हुन्छन्। माफ गर्नुहोस् TX, WY र NM, यो तपाईंको राज्यहरूमा अझसम्म सम्भव छैन!
तपाईको एजेन्सी सूचीबद्ध देख्नुहुन्न? हामीलाई यसको बारेमा थाहा दिनुहोस्।